Muxuu calanka Soomaaliya u kulansaday jaceyl iyo naceyb xad-dhaaf ah? - BBC News Somali
Muxuu calanka Soomaaliya u kulansaday jaceyl iyo naceyb xad-dhaaf ah?
Baraha Bulshada ayaa si wayn looga hadal hayaa xarigga nin dhallinyaro ah oo lagu xiray magaalada Hargeysa ka dib markii uu xirtay dhar laga sameeyay calanka Soomaaliya ee buluugga ah.
Ciidammada booliska ee Jamhuuriyadda iskeed madaxbannaanida ugu dhawaaqday ee Somaliland ayaa ninkaasi qabtay xilli uu ku xaragoonayay bartamaha magaalada Hargeysa.
Ninka la xirey oo magaciisa lagu sheegay Cabdiraxmaan Maxamed Cali "Aar", ayaa weli ku jira xabsi, inkasta oo laamaha amniga aysan ka hadlin xilliga ay maxkamad u gudbinayaan.
Dastuurka Somaliland kuma qorna in ay dembi tahay ciddii xirata dhar laga sameeyay calanka buluugga ah ee xiddigta dhexda ay uga taallo. Sidoo kale, madaxda Somaliland ayaa ka gaabsaday inay ka hadlaan dembiga lagu oogi karo ninkaasi la xiray.
Dharka lagu xardhay midabka calanka Soomaaliya oo Jigajiga qaali ka noqday
Iyadoo dhanka Somaliland ay jiraan dad loo xiray gabayo ay midnimada ku taageereen iyo dharka calanka buluugga ah oo ay xirteen, haddana dhanka Muqdisho waxaa jiro dad badan oo u ololeeya Somaliland ama ku lebista calanka Somaliland oo aan la xirin, sida ay sheegeen qaar ka mid ah dadka baraha bulshada isticmaala.
Ka gudub Twitter daabacaad W.Q @abdisalamisma1
Ciidamada Maamulka #Somaliland waxay xabsiga u daduuceen wiil lagu eedeeyey in uu calanka blue ga ah ee #Somalia ku lebisan yahay @musebiihi @M_Farmaajo @IsmailOguelleh pic.twitter.com/3vVmD2R4a1
— Abdisalam Ismail (@abdisalamisma1) 14 Bisha Shanaad 2019
Dhammaadka Twitter daabacaadda qore @abdisalamisma1
Ka gudub Twitter daabacaad W.Q @Faafreebnews
#Mogadishu vs #Hargeisa, how two cities people are civilized,#Mogadishu is Accepting any kind of feeling, while Hargeisa can’t tolerate one man’s dress!. #Somalia pic.twitter.com/tFNAHNW4pr
— Today from Somalia (@Faafreebnews) 15 Bisha Shanaad 2019
Dhammaadka Twitter daabacaadda qore @Faafreebnews
Balse waxaa jiro dad taageersan tallaabada booliska kana soo horjeeda waxa uu sameeyay ninka dhallinta yar.
Ka gudub Twitter daabacaad W.Q @Abdifatah414
#Somaliland waa aniga dalkayga mana jecli wax #qaranimadeeda hoos udhimaya inay saamayso, manta waxa la qabtay wiil xidhan dhar calanka #somalia xidhan aniga dalkayga sharaftisa maha in la eego maro buluga meel maraysa ee waa inuu gadha meel isga la hiigsan karo... #Somaliland... pic.twitter.com/trUE26avtn
— A.fatah H Mah'oud (@Abdifatah414) 15 Bisha Shanaad 2019
Dhammaadka Twitter daabacaadda qore @Abdifatah414
Ka gudub Twitter daabacaad W.Q @PeaceSL1
Beautiful picture!.#Somaliland police arrested a young man for wearing Somalia's flag in public today.
That country is responsible for our misery and many other things.
In Somaliland Republic it is ILLEGAL to show #Somalia flag in public. pic.twitter.com/7ujpkutWUd
— PeaceSL (@PeaceSL1) 14 Bisha Shanaad 2019
Dhammaadka Twitter daabacaadda qore @PeaceSL1
Laakiin dhallinyarada qaar ayaa uga falceliyay hab kaftan leh sida ninkan:
Ka gudub Twitter daabacaad W.Q @MaxamedSandheer
Waxaa ii qorshaysan marka aan seexdo in aan ku riyoodo aniga oo calanka #somalia ku labisan oo suuqa #Hargaysa dhex wareegaya. Waxaa rajeynayaa inta riyadaas aan ku jiro in xarig aan ka badbaado!
— Mohamed Sandheere (@MaxamedSandheer) 15 Bisha Shanaad 2019
Dhammaadka Twitter daabacaadda qore @MaxamedSandheer
Jigjiga ayaa laga "jeclaaday"
Tan iyo markii ay dhacday xukuumaddii hore ee Dowlad Deegaanka Soomaalida ee dalka Itoobiya, waxaa magaalada jigjiga ku soo badanayay waxyaabo badan oo dowladdii hore ay dadka deegaanka ka mamnuucday.
Waxyaabaha mamnuuca ahaa ayaa waxaa ka mid ah astaanta calanka Soomaaliya oo haatan aad looga xiiseeyo gudaha magaalooyinka sida Jigjiga oo kale.
"Diraca baatiga ama shiidka ah waxaan ku gadnaa 120 bir oo lacagta Itoobiya ah, balse marka lagu xardho calanka Soomaaliya waxaan ku gadnaa 300 oo bir." Ayay tiri Salma Yuusuf Ismaaciil.
Salma oo BBC-da kula hadashay magaalada Jigjiga ayaa sheegtay inay xukuumaddii hore aysan ogolaan jirin in Jigjiga lagu xirto calanka Soomaaliya, "isla markaasna ay ku taami jireen in ay arrintaasi mar uun u suuragasho."
Diracyada iyo go'yaasha calanka Soomaaliya lagu xardhay ayaa gabaabsi ku ah Jigjiga.
Ra'iisulwasaaraha cusub ee Itoobiya ayaa horay u sheegay in ay dadku aragtidooda oo xor ah dhiiban karaan iyaga oo u maraya wadooyiin nabad ah.
Magaalada Nairobi iyo magaalooyinka gobolka Waqoyi Bari ee Kenya sida Gaarisa ayaa caadi looga xirtaa calanka Soomaaliya dareen la'aan, sababtuna waa in aysan dawladdu mamnuucin, dadkuna ay xor u yihiin wixii ay cawrada ku asturanayaan.